Ciidamada Hirshabelle oo 5 Qof ku toogtay Deegaanka Qlaimoow ee duleedka Jowhar – Banaadir weyne
Ciidamada Hirshabelle oo 5 Qof ku toogtay Deegaanka Qlaimoow ee duleedka Jowhar
10 Luuliyo, 2018
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Sh.Dhexe ayaa sheegaya in Ciidamo katirsan Booliska Hirshabelle ay rasaas ku fureen gaari Homey ah oo Saaka ka oo tagay Magaalada Jowhar, kuna soo jeeda magaalada Muqdisho.
Rasaasta ayaa waxaa ku geeriyootay Laba Ruux, halka Saddex kalena ay ku dhaawacmeen, Sidaas waxaa soo sheegay Saraakiisha Ciidamada, Dadka dhintay Waxaa ku jirtra Haweeney, iyadoo QOfka kalena wali la’ aqoonsan la’yahay.
Halka gaariga lagu rasaaseeyay ayaa ah deegaanka Qalimoow, Qalimoow waxey 30 km Koofur kaga toosantahay Magaalada Jowhar, waana deegaan ay Dhawaan Shabaab ku dileen askari katirsan Ciidanka Hirshabelle, iyadoo Shalayna Gelinkeedii horena ay soo galeen Deegaanka Al-Shabaab.
Rasaasta ay fureen Ciidanka ayaa ka danbeysay kadib markii ay ka shakiyeen gaariga Caasiga/ Homeyga ahaa oo ku dhawaaday Bar Kontorool oo Booliska Hirshabelle ay Gelinkii dnabe ee shalay ka sameysteen Deegaanka Qalimoow oo udhexeysa Degmooyinka Blacad iyo Jowhar.
Deegaankas ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay weeraro Shabaab ay ka geysteen oo isugu jiray Mid Toos ahaa iyo Qaraxyo, waxaana Deegaanka meel ku dhow Bishii Ramadaan lagu dilay laba Xildhibaan oo katirsan Hirshabelle oo ku soo jeeday Magaalada Muqdisho. – Universal Somali TV